Kana Psychopaths ichienda Kubasa | Martech Zone
Svondo, Nyamavhuvhu 6, 2006 Chishanu, April 23, 2021 Douglas Karr
Vazhinji vehama dzangu dzepedyo uye vatinoshanda navo vanoziva kuti ini ndakave neruzivo rwakaipa kwazvo ndichisiya wandinoshandira nguva yadarika. Vamwe vanhu vanogona kushamisika kuti sei vanhu vasingakwanise kungoenderera mberi mushure mechimwe chinhu chakadai. Kana iye mushandirwi iri rakakura kwazvo sangano rinowanzo dzoka richidzoka uye kukuyeuchidza Kunze kwekunge iwe uchinyatsobva kunze kweguta, iwe unoramba uchinzwa 'izwi mumugwagwa' pane zvakaitika mushure mekunge waenda. Kusiya indasitiri haisi sarudzo - izvi ndizvo zvandinoita kuti ndirarame.
Kana iwe uri mhando yemunhu asingaparadzanise basa kubva kumba uye iwe uchidurura zvese zvaunazvo mumabasa ako - mamiriro akaita seaya anonetsa kusiya kumashure. Kune avo vedu vakasiya, tese tiri muchibvumirano pane zvakaitika. Asi vamwe vevaya vakasara vane mavanga akadzika zvekuti havakwanise kana kutsungirira kuenda kumasikati nekutaura nevamwe vedu. Fungidzira kuti mamiriro ezvinhu anofanira kuva anorwadza sei kukuvadza munhu akadaro.
Ndiri murume akanaka anofara. Ndinoda basa rangu uye ndinoda zvandinoita. Asi kana ini ndikayeuchidzwa nezve iyo nguva mune rangu basa, handigone kubatsira asi kushamisika kuti sei munhu ane basa achiri kunze uko uye achiri kukuvadza. Mazana evakuru vanhu vaenda, iro dhipatimendi rakakunda mibairo pamberi apa rave muzvipenga izvozvi, uye mashandiro ekambani ari kuderera nekuda kwayo. Asi ... munhu ane mutoro anoramba aripo. Ichi ndicho chakavanzika kwandiri.
Ini ndakanhonga bhuku kuBorder nezuro: Nyoka mumaSutu, Kana maPsychopaths achienda Kubasa. Ndakaverenga nesumo ndichimirira dzimwe shamwari ndikafunga kutenga bhuku iri. Kwaive chaiko nekuda kwekuda kuziva kupfuura kuyedza kutsanangura zvakange zvaitika kwandiri. Ini zvechokwadi ndanga ndisiri kuyedza kuisa maviri neaviri pamwechete. Asi ini zvino ndakaverenga izvi:
“Haasi munhu wese aifarira Helen, hongu, uye vamwe vevashandi vake havana kumuvimba. Akabata vashoma vaaishanda navo nekuzvidza uye chiyero chekuzvidza, achiwanzo kuseka kugona kwavo uye kugona kwavo. Kune avo vaakawana zvichibatsira pabasa rake, zvakadaro, aive nenyasha, aibata uye ainakidza. Aive netarenda rekuratidzira divi rake rakanaka kune avo vaainzwa kuve vanokosha, nguva yese vachiramba, kudzikisira, kurasa, uye kudzinga chero munhu asingabvumirane nesarudzo dzake.
Helen akatanga mukurumbira wekuudza vashandi vekambani izvo zvavaida kunzwa, nhanho-yekugadzirisa misangano neboka revatungamiriri sekunge vaive zvigadzirwa zveHollywood. Akasimbirira kuti mishumo yake yakanangana nekutevera zvakabvumiranwa zvinyorwa, achidzorera chero mibvunzo isingatarisirwe kana yakaoma kwaari. Sekureva kwevezera rake, Helen aive shasha pakushandisa pfungwa, uye akabudirira kushandisa mukuru wake, akatyisidzira mishumo yakananga, uye akaita mukurumbira hunhu hunokosha kwaari. ”
Idzi ndima mbiri dzakatumira kutonhora musana wangu. Handina chokwadi kuti bhuku iri richandibatsira kukanganwira uye kukanganwa zvakaitika kwandiri uye nevamwe vanhu vazhinji vakanaka, asi pamwe richandibatsira kurinzwisisa zvirinani. Ini handisati ndanzwa kubva kuvatungamiriri musangano uye mubatanidzwa vaimbove vandaishanda navo vanoremekedzwa - zvakapesana chaizvo, ini handitenderwe kusangana navo.
Zvichida vanogona kutora bhuku iri, kuriverenga, uye kuisa vaviri vaviri. Pasina kupokana, ivo vachazosvika pakuziva kumwechete kwandiri kuuya ikozvino.
Ivo vanogona kunge vachishanda ne psycopath.
Odha Nyoka Mune Masutu PaAmazon
Tags: psychopathpsychopathsnyoka mumasutu
Nov 21, 2008 pa2: 45AM
Chinyorwa chinonakidza, nekutenda handina kana chinhu chakaipa chinoitika kwandiri zvakadaro!
Wati wamboverenga nezve iyo pfungwa ye "yekudyidzana kuwirirana" ..
Mune mamwe makambani matambudziko haatariswe tinowirirana nekuti tinofanirwa kudaro, kuti tiwane mari. Saka munzvimbo dzemagariro waisatombogona kutaura nemumwe munhu asi kubasa unomanikidzwa. Kungo funga kunze asi kutsikirira izvi pamusoro penguva yakareba kunogona kukonzera psycopathic tendancies.
Nov 23, 2008 pa11: 28AM
Semumwe akabatwa nekubva kunotyisa, ndinonzwira tsitsi mamiriro ezvinhu aDoug, uye ndinogona kunzwisisa kuti zvinotora nguva yakareba sei kupora. Ini, zvakare, ndichiri pano makuhwa ezvakaitika kubva pandakaenda, uye kunyangwe ndangariro dzakadzima, handife ndakakunda zvachose kukuvara kwandakaitwa (kune avo vasina kuzviona, une rombo rakanaka - kuva nyajambwa we shanda a-maburi, angave asingavimbe navo-vashandi kana avo vari munzvimbo yepamusoro, unonzwa kunge wabatwa chibharo, kubirwa, kurohwa, uye kusiiwa uchifunga kuti wafa). Imwe nzira ndeyekuti "kurasikirwa kwavo" uye "ndinovanzwira tsitsi." Ini zvakare ndinofunga "majee akaita kuti hupenyu hwangu husatsungirike kwemakore ese iwayo anofanirwa kunge aine nyaya dzekuzvishingisa kuti ashande nesimba pakuita hupenyu hunopa hupenyu hwehero." Dzose pfungwa dzakandibatsira kupora… pamwe vaizokubatsira, zvakare, Doug.